downloaded OS တွေကို CD မကူးပဲဘယ်လိုတင်မလဲ — MYSTERY ZILLION
downloaded OS တွေကို CD မကူးပဲဘယ်လိုတင်မလဲ
ကျနော် သိချင်တာလေးတစ်ခုက Download လုပ်ပြီးသား Window OS တွေကို Boot able CD မကူးပဲ install လုပ်လို့ရသလား။ ရတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ အသေးစိတ်လေး(ဖြစ်နိုင်ရင် ပုံလေးတွေနဲ့ပါတင်ပေးပါလားဗျာ။)သိချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော် Boot able CD မကူးတတ်တာကတစ်ကြောင်း CD က harddisk လောက်စိတ်မချရတာကြောင့်တစ်ကြောင်းပါ။ နောက်တစ်ခါတည်းပဲ မေးချင်ပါတယ်။ print screen ဖမ်းထားတဲ့ပုံတွေကို ဘယ်လိုတင်လဲဟင်။
print screen ဖမ်းထားတဲ့ပုံတွေကို ဘယ်လိုတင်လဲဟင်။
အဲ ့ဒါကို ဘယ်နားမှ တင်ချင်တာလဲ မသိဘူးနော် ပြောပြပေးပါလား
ကPosts မှာပြောတာထင်တယ်..posts မှာဆိုရင် B I u ဘားတန်းဘေးမှာ တောင်ပုံ လေးကိုနှိပ်ပြီးတင်လို့ရသလို drap & drop
ကျနော် သိချင်တာလေးတစ်ခုက Download လုပ်ပြီးသား Window OS တွေကို Boot able CD မကူးပဲ install လုပ်လို့ရသလား။
မဖြစ်နိုင်ပါ...OS အသစ်တင်ပြီဆိုကတည်းက အဲဒီတင်တော့မယ့် OS Installer နဲ့ပဲ boot လုပ်ရမှာပါ။ ဘာ OS တွေများ ဒေါင်းထားတာလဲ။ အခု XP နောက်ပိုင်း OS တွေက စီဒီနဲ့ မဆန့်တော့ပါ။
Installation ကို network ကနေ install လို့ရပါတယ်။
Boot Disk ကိုသုံးပြီး network boot လုပ်လို့ရပါတယ်။ Floopy drive ပါမရှိဘူး အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လဲ PXE enable ဆိုရင် PXE က boot လုပ်ပြီး TFTP server ကနေ install လို့ရပါတယ်။ PXE support ကတော့ BIOS နဲ့ network card ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ဒါ Windows အတွက်ဆိုရင်ပါ။ Boot Disk တွေကတော့ bootdisk.com မှာရှာလိုက်ပါ OS ပေါ်မူတည်ပြီးအများကြီးရှိပါတယ်။
Linux ဆိုရင်တော့ NFS, http နဲ့ FTP တခုခုအသုံးပြုပြီး network install လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဘာ OS ကိုစမ်းချင်တာလဲ တချက်ပြောပေးပါဗျာ။
CD burner က ရန်ကုန်မှာဆိုရင် Nero သာဝယ်သုံးလိုက်ပေါ့ဗျာ။ Freeware ထဲကဆိုရင် ImgBurn ဆိုတာကောင်းတယ်။ အသုံးပြုရလွယ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုနှိပ်လိုက်ရင် http:// ဆိုပြီးလင့်တောင်းနေတယ်။ တကယ်ဆို browse ဆိုပြီးပေါ်သင့်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။
You need to upload your images somewhere first bro. And paste your image URL in the box.
Imageshack is easy to use for such purpose. After uploading, it will give you 'Direct Link' and 'Short Link' . You can copy either one ( recommand to use direct link) and paste into box here. Done